वडा नं. ३१ मा रहेको वेगनास ताललाई वाटर स्पोर्टस्को रुपमा विकास गरिने – Sabaikoaawaj.com
वडा नं. ३१ मा रहेको वेगनास ताललाई वाटर स्पोर्टस्को रुपमा विकास गरिने
मङ्लबार, पुस १८, २०७४ 7:24:30 PM	मा प्रकाशित
पोखरा, १८ पुस पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. ३१ मा रहेको वेगनास ताललाई वाटर स्पोर्टस्को रुपमा विकास गरिने वडा कार्यालयले योजना बनाएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि वेगनास तालमा वाटर स्पोर्ट रुपमा विकास गर्ने र त्यसको लागि अध्ययन जारी रहेको वडाध्यक्ष कमलबहादुर थापाले जानकारी दिए । जनप्रतिनिधि आईसकेपछि वडाको विकासको लागि बाटो र खानेपानीको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ तर रकम निकासी भएको छैन । योजनाको सम्झौता भएपछि बाटो खानेपानीको काम सुरु गरिने वडा कार्यालयले जनाएको छ । पचभैया भन्ने ठाउँमा २ किलोमिटरको बाटो निर्माण सुरु भएको छ । रकम विनियोजन भएको तर निकासा नभएकोले त्यहाँका स्थानिय जनताको उत्साहजनक सहयोग र सहभागीतामा बाटो खन्ने काम सुरु भएको छ ।
त्यो बाटोको सम्झौता हुन बाँकी रहेकपनि सम्झौता हुनु अगावै स्थानियको आर्थिक सहयोगमा बाटो खन्ने काम सुरु भएको र त्यसलाई विस्तार गरिने छ । वडा अन्तरगत २५ वटा बाटोहरु विस्तारको काम भैरहेको छ । अब एउटा महानगर र विकट ठाँउ जोड्ने कनेक्टिङ्ग बाटो निर्माण गर्ने योजना रहेको जसको लागि १ करोड बजेट विनियोजन भएको वडाध्यक्ष थापाले बताए । खानेपानीको सुविधाको लागि साना शहरी खानेपानी अन्तरगत वेगनासको पारिपट्टिको डाँडामा त्यहाँका स्थानियसँग २०÷२० हजार रकम संकलन गरेर खानेपानीको टेण्डर निकाल्दै छ, एक घर एक खानेपानीको अभियान हो त्यो । २ वर्षभित्रमा ६ सय धारा निर्माण गरिने योजना रहेको वडा कार्यालयले बनाएको छ । यो अभियान आएपछि वडाको सेन्टर÷सेन्टरमा सार्वजनिक शौचालय राख्ने तयारी भैरहेको थापाले बताए । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो गरिनुका साथै वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता, असाहय भएकाहरुलाई प्रदान गरिने भत्ताको खाता पहिले कृषि विकास बैँकमा भएकोमा अहिले उनीहरुको सजिलोको लागि वेगनासको नजिकै ग्लोबल आईएमई बैँकमा सारिएकोले भत्ता बुझ्न आउनेहरुलाई सुविधा मिलिरहेको छ ।
जनप्रतिनिधि आईसकेपछि खानेपानीको पाईप निरिक्षण गरेर रकम विनियोजन गरिएको छ । वडाको सरसफाईको लागि सरसफाई कार्यक्रम तिव्ररुपमा चलाईएको छ । वडालाई उज्यालो बनाउनका लागि जिल्ला समन्वय समितिसँग विजलुीको पोल माग गरिएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा वडाका कुनै विद्यालयमा कम विद्यार्थी भएकोले तिनिहरुलाई मर्ज गर्नुपर्ने भएको छ । वडाका तीन वटा स्वास्थ्य केन्द्रहरु पनि क्रियाशिल रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् । वेगनासगाउँ रिमोट एरियामा रहेकोले त्यहाँ विकास निर्माण र होटलहरु निर्माणको लागि आह्वान गरिएको छ भने वडामा फाईभ स्टार होटलहरु बन्दै छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकार भए पछि विकासको कामले अझै गति लिने वडाध्यक्ष थापाको विश्वास रहेको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १८, २०७४ 7:24:30 PM